‘अहिले नेतृत्वका लागि बल गरेनौं भने भावी पुस्ताले धिकार्नेछ’ :: Setopati
‘अहिले नेतृत्वका लागि बल गरेनौं भने भावी पुस्ताले धिकार्नेछ’
कांग्रेस वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएका सगुन कँडेल, शिवहरि तिमिल्सिना र पूजा फुयाल। फाइल तस्बिर।
कांग्रेसका युवा प्रतिनिधि
यो पनि: कांग्रेसमा कति आउँछन् महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि?
यो पनि: राजनीतिमा आए देउवाका छोरा जयवीरसिंह
यो पनि: आठ तहमा हुँदैछ कांग्रेसको अधिवेशन, कुन तहमा को हुन्छन् मतदाता?
यो पनि: यसैपालि क्रियाशील सदस्य बनेकाहरू कांग्रेसका कुन-कुन पदमा उठ्न पाउँछन्?
यो पनि: खुमबहादुर खड्काका छोरा पनि कांग्रेस राजनीतिमा, भन्छन्- बुवाको बिँडो थाम्छु
कांग्रेसले पहिलो चरणमा ६५ जिल्लामा वडा अधिवेशन गरेको छ। २१ जिल्लाको वडा अधिवेशन बाँकी छ। वडाबाट चयन भएका क्षेत्रीय प्रतिनिधि अब महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार दिन योग्य भइसके। युवाहरू अब महाधिवेशन प्रतिनिधि आए भने कांग्रेसको केन्द्रीय नेताहरू पनि युवाहरू नै आउने सम्भावना देखिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्रीमा उठ्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा
गगनले गरे कांग्रेस महामन्त्री लड्ने घोषणा, अरू को-को छन् आकांक्षी?
गगन र विश्वप्रकाशसँगै प्रदीप पौडेल पनि कांग्रेस महामन्त्रीमा भिड्ने
कल्याण गुरूङले भने- बिपी युवामै सभापति हुनुभयो, मैले पनि आँट गरेँ
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २६, २०७८, ०६:५५:००